လည်လွန်းတဲ့ဘီး ချေးသင့်ခြင်း | Zizawa's refuge
Burma, Burmese, Journalist, Literature, Politics
Posted by zizawa ⋅ 02/08/2010	⋅6Comments
ကမ္ဘာ့ဖလား ပြီးသွားပြီ ဆိုပေမင့် ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်ထဲမတော့ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်ရှုးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ခဏခဏတွေ့နေရတုံးပါလား။ ဟိုတလောက နေ၀င်းမောင်တို့ အုပ်စုရဲ့  ဒီမိုကရေစီ ပညာပေးဆောင်းပါးကြီးကို ကြပ်ပြေးမောင်တွေက သဘောတွေ့ပုံမရလို့ The Voice လည်း နှစ်ပတ်လောက် လျှာခင်အဖြတ်ခံလိုက်ရရှာတယ်။ နေ၀င်းမောင်ဆီက အသံထွက်မလာပေမဲ့ (သလိပ်ကပ်နေပုံရတယ်) ကျော်မင်းဆွေကတော့ လျှာလိပ်သံလေးနဲ့ ဖေ့ဘွတ်မှာ ညည်းရှာတယ်။ ဂျာနယ်ကို လျှာခင်တိခံရတဲ့ ကိစ္စမှာ သဘောရိုးနဲ့ ၀င်လုပ်နေသူတွေကို စာနာစိတ်ထားနိုင်ပေမယ့် အငှားဗိုက်နဲ့ ဓားထိုးခံရမဲ့ အန္တရယ်ကို မကြောက်လို့ မိုက်တိမိုက်ကန်း ၀င်လုပ်တာဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ်လို့ပဲ သဘောထားရမှာဘဲ။
နေ၀င်းမောင်တို့ ဟိန်းလတ်တို့အနေနဲ့ သတိမူသင့်တာက စစ်အုပ်စုက ကိုယ့်ကို ရေးချင်တာ ရေးခွင့်ပြုထားဆိုတာ သူတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့ယှဉ်လာရင် သက်ညှာမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မထွက်ဖူးဆိုတာပဲ။ ကိုယ့်ဆရာတွေလည်း သိချင်သိမှာပါ။ အချဉ်တွေမှ မဟုတ်ဘဲ။ ဘယ်ကွေ့ဘယ်တက်နဲ့ လှော်ရမလဲဆိုတာ သဘောပေါက်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် လူရှေ့ မှာဗြောင်ကြီး ပုဆိုးချွတ်ခံရတာကတော့ မကောင်းဘူး။ စစ်အုပ်စုနဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကို ဒင်းတို့ဆီမှာ အတိုးကြီးကြီးနဲ့ အပေါင်ထား လုပ်ရတာမျိုးကလား။ ဒင်းတို့က သူတို့အုပ်စု ကွက်ကွက်လေးရဲ့ အကျိုးစီးပွားလောက်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားထာ၊ အကာအကွယ်ပေးတာကလား။
« ပိုက်ဆံရဲ့ တန်ခိုးနဲ့ အနောက်ပီးတော့ အရှေ့ အလှည့်
What political courage looks like »
6 thoughts on “လည်လွန်းတဲ့ဘီး ချေးသင့်ခြင်း”
Another case of ‘loss in translation’🙂
Posted by watote | 02/08/2010, 10:49 Reply to this comment	Irrawaddy ကအင်တာဗျူးကို ဖတ်ချင်ရင် ဒီမှာလင့်..
Posted by watote | 02/08/2010, 12:27 Reply to this comment	ကိုဝတုတ်တို့ကတော့ ရိုက်ချက်ပြင်းလှချည်လား။ “မှားမှန်း မှန်မှန်း ဘယ်သိမလဲ၊ ကျနော်လည်း ကူးရေးရတာလေ” ဆိုတာကတော့ Resource တွေ Refernece တွေ limtied ဖြစ်လို့ Validate မလုပ်နိုင်ဘူး လို့ နားလည်မိတယ်။ (စာရေးဆရာ ဖြစ်နေပေမယ့်) ကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းလောက်အောင် သူအပြောအဆို မှားတယ်လို့ပဲ သဘောထားပေးပါတယ်။ ဒိထက်တော့ မပိုပါဘူး။ မြန်မာပြည် လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲကို CIA Web Site လိုမျိုးကိုပဲ Reference လုပ်ကြပြီး အမှန်အကန် အချက်အလက်ကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Validate လုပ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခက်ခဲတယ်လေ။ CNN က သတင်းထောက် NY Times က ဂျာနယ်လစ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆရာထက် နည်းနည်းပိုသာမှာပေါ့။ ဒါလေးတော့ နားလည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ အပေးအယူ တစ်ခုခုများ ရှိသလားမသိ။ ဇာတ်လမ်းက မအူမလည်နဲ့။ Bravo!
Posted by Andy Myint | 02/08/2010, 14:45 Reply to this comment	You are very generous, Ko Andy..🙂
Posted by zizawa | 02/08/2010, 15:06 Reply to this comment	Bravo ! ( copy from KAD)🙂
Posted by K | 03/08/2010, 02:24 Reply to this comment	Long time no hear amagyi.
Posted by zizawa | 03/08/2010, 03:16 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...